TAORIAN’NY VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY : Manao tohivakana ny fiarahabana ny Filoha vaovao
Tao anatin’ny 24 ora nivoahan’ny voka-pifidianana ofisialy dia nanao ranolava ny fiarahabana ny Filoham-pirenena vaovao, Andry Rajoelina. 9 janvier 2019
Anisany efa nahavita nitondra ny teny firariantsoa ho azy ny Filoham-panjakana Rivo Rakotovao, ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, Ny maso ivohon’i Etazonia miasa sy monina eto Madagasikara, ny filohan’ny antoko Antoka sy Dinan’ny Nosy Edgar Razafindravahy. Omaly maraina dia namoaka fanambaràna mitondra izay teny fiarahabana izay ihany koa ny teo anivon’ny antoko Hery Vaovao ho an’ i Madagasikara (Hvm).
Nivondronan’izy ireo ny firariantsoa ho an’ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina mba hahaleo hahalasana eo amin’ny adidy mavesatra izay hiantsorohany ho an’ny firenena sy vahoaka Malagasy. Ho an’ny antoko Hvm manokana dia niarahan’ny mpikambana mpanorina, ny birao nasionaly, ireo mpiahy sy mpandrindra miaraka amin’ireo olom-boafidy rehetra ao anatin’ ny antoko nanao ny teny fiarahabana narahina tso-drano ho an’ny Filoham-pirenena vaovao.
“Mitso-drano anao, Andriamatoa Filoha, hahaleo hahalasana ka hanandratra avo ny firaisankinam-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena. Miarahaba ny antoko Tanora Malagasy Vonona nahatafita soa amantsara ny kandidà izay natolony”, hoy ilay taratasy mirakitra fiarahabana ho an’ny filoha Andry Rajoelina.